Divay avy any Kosovo - Tsy Costco
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Divay avy any Kosovo - Tsy Costco
Mitady WOW arotsaka ao fitaratra divay? Soso-kevitro: divay avy any Kosovo, indrindra ny trano mimanda vato 2018, Rose, Pinot Noir, Lohasahan'i Rahoveci.
Aza very hevitra
Mampifangaro an'i Costco amin'i Kosovo ny olona sasany. Vao haingana, tahaka ahy divay mandatsaka tao anaty vera, ary nahasarika ny sain'ny haran-dranomasina tsara tarehy, nolazaiko fa avy any Kosovo ilay divay ary tena matsiro. Ny valiny, "Tsy fantatro fa nivarotra divay tena tsara i Costco." "Tsy misy! Tsy Costco… Kosovo (!) Ilay firenena izay miorina amin'ny faritra atsimo atsinanan'i Eropa izay, tamin'ny fotoana iray, dia faritany mizaka tena ao Yugoslavia teo aloha.
Miaraka amin'ny mponina manodidina ny 2 tapitrisa dia manamorona ny sisin-tanin'i Serbia (avaratra sy atsinanana), Makedonia Avaratra (atsimo atsinanana), Albania (atsimo andrefana) ary Montenegro (andrefana) miaraka amin'ny Alpes Albania sy Sar Mountains izay miakatra atsimoandrefana sy atsimo atsinanana.
Notohizako ny fanazavako fa hatramin'ny fotoanan'ny ady an-trano dia nanana tanimboaloboka mahavokatra be i Kosovo. Mampalahelo fa nandritra ny fifandonana dia maro ny famiazam-boaloboka navela handeha hitsoaka - ary naharitra taona maro vao tafarina ilay indostria.
Ny indostrian'ny divay, ao amin'ny Repoblikan'i Kosovo izay fantatra ankehitriny, dia efa 2000 taona mahery. Mandra-pahatongan'ny tapaky ny 20th taonjato maro an'isa ny divay dia namboarina ary novokarin'ny tantsaha tantsaha fivelomana ho an'ny fahafinaretany manokana ary amidy amin'ny mpiara-monina aminy. Tamin'ny taona 1950 ny fitondrana Yugoslavia, nanamarika ny mety hisian'ny famokarana divay indostrialy, dia namorona "orinasa mpamokatra divay" telo lehibe ary nanohana ny famokarana divay hatramin'ny tapaky ny taona 1980.
Nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny indostrian'ny divay ny fifandonana. Talohan'ny ady, ny fanondranana dia nifantoka betsaka tamin'ny marika divay tokana tamin'ny tsena fanondranana tokana. Amselfedler (saha blackbird), divay mena mamy avy any Pinot Noir sy Gamay no zava-pisotro tena faniry tany Alemana. Tranga an-tapitrisany no naondrana isan-taona ary be ny fangatahana… ary avy eo ny ady. Ny divay avy any Kosovo miaraka amin'ny toerany eo amin'ny tsenan-divay alemana dia norobain'ny divay mitovy endrika aminy - toy ny mena avy any Valencia, Espana ary nahasolo an'i Kosovo tao anatin'ny 18 volana taorian'ny nanombohan'ny ady Kosovan. VAKIO NY ARTICLE TRANO AO WINES.TRAVEL.